काठमाडौं । ‘राष्ट्रिय गौरवको बहुप्रतिक्षित मेलम्ची खानेपानी आयोजनाबाट उपत्यकाभित्र खानेपानी उपलब्ध गराउने गरी पटक पटक प्रचार गएिको र निर्धारित समयावधिभित्र विभिन्न कारणले पानी वितरण कार्यमा ढिलाई भइरहेको हुँदा जनतामा बिभिन्न आशंका उत्पन्न भएकोले शीघ्रातिशीघ्र निर्माण कार्य सम्पन्न गरी उपत्यकाबासीलाई विश्व स्वास्थ्य संगठनकको मापदण्ड अनुसार उपलब्ध गर्न÷गराउन समिति नेपाल सरकार खानेपानी मन्त्रालयलाई निर्देश गर्दछ ।’
यो निर्णय संसदको विकास समितिको आइतबार बसेको बैठकको हो । राजधानीवासीका लागि वहुप्रतिक्षित मेलम्ची खानेपानी आयोजना सम्वन्धमा समितिले यो निर्णय गर्नुअघि त्यसबारे गम्भिर छलफल भएको थियो । खानेपानी तथा सरसफाइ मन्त्री विना मगरलाई बोलाइए पनि उनी मन्त्रालयका सचिव गजेन्द्र ठाकुरलाई पठाएर आफु भने सो बैठकमा उपस्थित भइनन् । उनी त्यो दिन सो बैठकमा उपस्थित भएको भए सायद समिति सदस्यहरुले उनको चर्को आलोचना अवश्य नै गर्थे । सभापति कल्याणी खड्काले त मेलम्ची आयोजनाले रजत वर्ष मनाउने बेला भयो, तैपनि राजधानीमा पानी आएन भन्दै व्यङ्ग्य समेत कसिन् । समितिले आयोजनाका तर्फबाट मन्त्री मगरले पटक पटक काठमाडौंमा पानी ल्याउने भन्दै भाका सार्दै गरेर आजित बनाएपछि यो निर्णय गरेको बताइएको छ ।
किन सर्छ भाका ?
कर्मचारी संयन्त्रले खानेपानी मन्त्रीलाई गलत ‘ब्रिफिङ’ गर्दा पटकपटक मेलम्चीबाट राजधानीमा पानी आउने समय फरक पर्ने र राजनीतिक नेतृत्वले गाली खाने गरेको बताइएको छ । यो पटक भने उपत्यकावासीको आशाको बिन्दु बनेको मेलम्चीको पानी ६० दिनमा राजधानीमा झार्ने खानेपानी मन्त्रालयले प्रतिबद्धता जनाएको छ । यसअघि पनि पटकपटक मेलम्चीको पानी राजधानी झर्ने मिति मन्त्रालयले सार्दै आएको थियो । वर्तमान सरकार गठन भएपछि खानेपानी मन्त्रालयको जिम्मेवारी सम्हालेका मन्त्री विना मगरले दशैँको उपहारस्वरुप राजधानीवासीका धारामा मेलम्चीको पानी दिने सार्वजनिक घोषणा गरेकी थिइन् । तर त्यसयता भाका भने पटक पटक सर्दै आएरपछि सर्वसाधारण जनता भने गुमराहमा परेका छन् । आइतबार प्रतिनिधिसभा, विकास तथा प्रविधि समितिको बैठकमा मन्त्रालयका सचिव गजेन्द्रकुमार ठाकुरले सम्पूर्ण काम ६० दिनमा सकेर सुन्दरीजलको प्रशोधन केन्द्रमा पानी खसाल्ने प्रतिबद्धता व्यक्त गर्दा समितिका सभासदहरु भने ढुक्क हुन सकेनन् । अनि उनीहरुले सो आयोजना स्थलगत अवलोकन नै गर्ने र सबैले वास्तविक अवस्था बुझ्ने निर्णय गरे । निर्णयमा भनिएको छ, ‘मेलम्ची खानेपानी आयोजनाको विद्यमान अवस्था बुझ्नको लागि उक्त आयोजनाको समन्वयमा उपयुक्त समयमा समितिबाट स्थलगत अध्ययन, अवलोकन भ्रमण गर्ने निर्णय भयो ।’प्राविधीक समस्याका कारण यसअघिको मन्त्रालयको वाचाअनुसार दशैँअघि पानी नआएको भन्दै सचिव ठाकुरले गल्ति महसुस गरे पनि समितिका अधिकांश सदस्यहरुको चासो भने २५ वर्ष पुग्न लाग्दा पनि अझै किन बन्न सकेन र सञ्चालनमा ल्याउन नसक्ने भए किन गल्ति प्रचार गरेर जनतालाई भ्रम छाडियो भन्ने थियो ।
अड्कियो कहाँ ?
मेलम्ची आयोजनाको पछिल्लो अवस्था जटिल नै भएकाले त्तकाल पानी ल्याउन संभव नभएको बताइएको छ । ‘अब करीब दुई हजार मिटर सुरुङ ढलान गर्न बाँकी छ भने तीन वटा ‘भ्यान्टिलेसन’को काम शुरु भएको छ, त्यसैले अबको कम्तिमा दुई महीनामा आयोजना सम्पन्न गरी पानी ल्याउन सकिन्छ । ’–एक इन्जिनियरले भने । त्यतीमात्र होइन अम्बाथान भन्ने स्थानबाट सुरुङमा पानी हालेको तीन दिन भर्नै लाग्ने मन्त्रालयले जनाएको छ । चार महीनासम्म पुरानो संरचनाबाट पानी वितरण गर्ने तयारी भएको छ । त्यस अवधिमा नयाँ वितरण सञ्जाल परीक्षण गरी पानी हालिनेछ । पहिलो चरणमा पानी आएलगत्तै उपत्यकाका एक लाख ८० हजार धारामा पानी वितरण गरिने मन्त्रालय स्रोतले बतायो । मन्त्रालयले पानीको महसुल न्यूनतम रु ३०० हुने गरी बढाउने तयारी गरेको जनाएको छ ।
चालु आवमा सक्ने लक्ष्य
आर्थिक वर्ष २०५५÷२०५६ देखि शुरु भएको आयोजना चालू आवमा सम्पन्न गर्ने सरकारको लक्ष्य छ । यो आयोजना सम्पन्न भएपछि दैनिक १७ करोड २८ लाख लिटर पानी राजधानीमा वितरण हुनेछ । आव २०७२÷२०७३ देखि नै मेलम्चीको दोस्रो चरण शुरु भएको थियो । दोस्रो चरणमा याङ्री र लार्के खोलाको १७÷१७ करोड लिटर गरी थप ३४ करोड लिटर पानी उपत्यकामा ल्याइने कार्यक्रम छ । दोस्रो चरणका लागि चालू आवमा विस्तृत परियोजना प्रस्ताव सम्पन्न गरी मुआब्जा वितरणलगायत काम शुरु गर्ने मन्त्रालयको योजना समितिमा प्रस्तुत भएको छ । तीन वर्षमा दोस्रो चरणको काम पनि सक्ने मन्त्रालयका सचिव गजेन्द्र सचिव ठाकुरको भनाई छ । याङ्री र लार्के खोलासम्म पुग्न थप ११ किमी सुरुङ निर्माण गर्नुपर्छ । संविधानमा खानेपानी सेवालाई मौलिक हकका रुपमा स्थापित गरिएको छ । विसं २०४६ अघि शुरु भएको आयोजनाको प्रारम्भिक प्रक्रियाका बारेमा विसं २०४७ को अन्तरिम मन्त्रिपरिषद्मा समेत छलफल भएको थियो । काँग्रेसका तत्कालिन सभापति र प्रधानमन्त्री कृष्णप्रसाद भट्टराईले काठमाडौंका मतदातालाई मेलम्चीको पानीले काठमाडौं सडक धोइदिने आश्वासन दिएका थिए ।
ठेकेदार कम्पनीका कारण पनि ढिलासुस्ती
मेलम्ची खानेपानी आयोजनाको सुरुङ निर्माणको काम इटालियन कम्पनीले गरेको हो । नयाँ प्रविधिका निर्माण सामग्री समयमा नभित्र्याउँदा समयमै सुङको काम सम्पन्न हुन सकेन । गत वर्षको असारमा अघि नै मेलम्ची खानेपानी विकास समितिले गत सालको असोज मसान्तसम्म सुरुङ निर्माण सम्पन्न गरी उपत्यकामा पानी खसाल्ने लक्ष्य राखेको थियो । निर्माण व्यवसायीले नयाँ प्रविधिका सामान नल्याएकाले सामग्रीको मर्मत सम्भारमा समय बित्दा छिटो काम हुन नसकेको बताइएको छ । लक्ष्य पूरा गर्न दैनिक २५ मिटर सुरुङ खन्नुपर्नेमा दैनिक १८ मिटर मात्र खन्ने काम भइरहेकोले समयमा सुरुङ सम्पन्न भएको बताइएको छ । इटालियन निर्माण व्यवसायी सिएमसीलाई नयाँ प्रविधिका सामग्री ल्याई काम गर्न २०७३ माघमा नै निर्देशन दिइएको थियो, सिएमसीले खर्च बढ्ने भएकाले नयाँ प्रविधिका सामग्री झिकाउन नमान्दा समस्या भएको बताइएको छ । सुरुङ निर्माण सकेर भित्र प्लाष्टरको काम गरी २०७४ चैत अगावै उपत्यकामा मेलम्चीको पानी ल्याइसक्ने नयाँ लक्ष्य समितिले लिएकोमा त्यो पुरा हुन नसके पछि महानगरवाशी हिस्स परेका थिए । सुन्दरीजलदेखि सिन्धुसम्मको ९.५ किमी सुरुङ खनिसकेपछि बाँकी काम सक्न हाल चार स्थानबाट काम भइरहेको थियो । सिन्धुबाट ग्याल्थुम, ग्याल्थुमबाट सिन्धु, ग्याल्थुमबाट मुहान र मुहानबाट ग्याल्थुम गरी चार स्थानबाट सुरुङ खन्ने काम गरिएको थियो । सुरुङको गुणस्तरमा समस्या आउन नदिन आयोजना लागेको इन्जिनीयरहरु बताउँछन् । ‘संरचनालाई कम्तीमा एक शताब्दी सम्म टिकाउने गरी काममा ध्यान दिइएको बताइएको छ । कमजोर संरचना बनाए सुरुङको बीचमा पहिरो खसेर पानी रोकिन सक्छ, यसैले छिटो पानी ल्याउने नाममा गुणस्तरमा सम्झौता गर्न नदिइने सरोकारवालाहरु बताँउछन् । सिन्धुबाट ग्याल्थुमतिरको सुरुङ निर्माणमा कमजोर चट्टान भेटिएकाले पनि काममा केही ढिलाइ भएको हो । यसअघि विसं २०७३ वैशाख १ गते मेलम्चीको पानी राजधानी ल्याइने सरकारको प्रतिबद्धता थियो । संशोधित प्रतिबद्धता अनुसार २०७४ को दशैंमा पानी ल्याउने लक्ष्य राखिएकामा त्यो पनि सम्भव नभएपछि समितिले गम्भिर चासो लिएको हो ।
यस्तो छ मेलम्चीको पुष्ठभूमी ?
०४५ सालमा विन्नी एन्ड पाटनर्स युकेले खानेपानी समस्या समाधानका लागि २० आयोजनाको सम्भाव्यता अध्ययन गरेको थियो । तीमध्ये मेलम्ची पहिलो प्राथमिकतामा प¥यो । ०४७ सालमा स्टेनले एन्ड एसोसिएसनले मेलम्चीबारे थप अध्ययन ग¥यो । ०४९मा अस्ट्रेलियन कम्पनी स्मेकले गरेको अध्ययनले मेलम्चीको विकल्प नभएको ठहर गर्दै ०५७ सालमा ३७ अर्ब लागतमा मेलम्ची आयोजना अगाडि बढाउने घोषणा भयो र ०५८ मा आयोजना सुरु भयो । आयोजना समयमा सम्पन्न हुन नसक्नुमा त्यहाँभित्र हुने भ्रष्ट्राचार नै रहेको बताइन्छ ।